Oman: Mitohy Ny Fanenjehana Mpikatroka Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2012 2:01 GMT
Vakio amin'ny teny Dansk, Français, Español, English
Iray amin'ireo firenena tsy dia mahasarika loatra ny fampahalalam-baovao iraisam-pirenena sy ny fikambanana samihafa i Oman. Hatramin'ny niandohan'ilay antsoina hoe “Lohataona Arabo” tamin'ny taona 2011, nanjakan’ny fihetsiketsehana marobe mitaky fanovana eo amin’ny karama, ny fitsarana ary ny firafitry ny politika ny tao Oman.
Tamin’ny herinandro lasa, nampiseho ny anaran’ireo telo nogadraina ny tenifototra tao amin’ny Twitter #اسماعيل_حبيبة_يعقوب. Mpilalao volley ball Oman teo aloha i Habiba Al Hinai sy ny mpikatroka Esmail Al Muqbali ary Yaqoub Al Kharusi izy ireo. Nosamborina ireo mpikatroka rehefa avy nitsidika ny toerana misy fitrandrahana solitany Fahoud tamin’ny Alakamisy lasa teo mba haneho ny firaisankinany amin’ireo mpiasa Omanita mitokona noho ireo orinasa hafa nifanaiky hamita tetikasa amina orinasa mpitrandraka solitany roa ao amin’ny firenena. Araka ny voalazan’ny Gulf News, nolazaina fa tsy ara-dalàna ny fitokonana ka niangaviana ireo mpiasa mba hanemotra izany araka ny fangatahan’ireo orinasa sivy mpitrandraka solitany. Nahazo fampitandremana ireo mpiasa ka mety ho very asa raha mbola manohy ny fitokonana, fitokonana izay mitaky karama tsaratsara kokoa, tamby noho ny loza mety hihatra ary fanomezana fisotroa-dronono.
Ireo mpikatroka telo nogadraiana: Habiba, Esmail, ary Yaqoob (nalefan’ ilay mpamahana bolongana nogadraina: Nabhan Al-Hinshi)
Roa no navoaka, Bilaogera hafa nosamborina
Enina andro lasa izay, noafahana i Al Hinai sy Al Kharusi, mbola notanana kosa ilay mpikatroka Esmail Al Muqbali. Tsy vao voalohany izao fisamborana izao ary mbola manohy ny fisamborana ireo Omanita mpiaro ny zon’olombelona tahaka an’i Khalfan Al-badawawi, iray amin’ireo mpikarakara ny Diabe Sahar 2011, sy ilay mpamahana bolongana Ishaq Al-aghbari, nosamborina noho ny tsikera nataony tamin’ny fanjakana mahefa. Tsy mahazo miresaka amin’ny mpisolovavany ary tsy mahazo tsidihan’ny fianakaviany ireto notanana ireto, mbola tsy fantatra ihany koa ny antony nanenjehina azy ireto, araka ny voalazan’ny gazety an-tserasera Watan.
Tsy notaterin’ny fampahalalam-baovao mahazatra izany fisamborana izany ka ny tambazotra sosialy ihany no hany loharanom-baovao tokana mitantara ny fisamborana niseho. Araka ny hita tamin’ny adihevitra Gulf Forum tao amin’ny pejy Facebook, fisamborana enina hafa no nitranga tamin’ny Zoma. Anisan’ny voasambotra tamin’izany ny mpamahana bolongana Hassan Al-Raqishi, ilay mpanoratra Humood Al-Rashdi, sy mpamahana bolongana Nabhan Al-Hinshi, Hamad Al-Khrousi (poety), ary Ali Al-Saadi sy Ali Al-Haji.
Ity ambany ity ny lahatsary iray nivezivezy tamin’ny aterineto, ahitana ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpikatroka notanana nanomboka tamin’ny fiandohan’ny fihetsiketsehana tamin’ny taon-dasa (narakitr’ilay mpiserasera newoman2011):
Fitokonana tsy hisakafo
Nahazo sady roa taona an-tranomaizina ny iray amin’ireo voatana, Hilal Al-Alawi, noho ny fihazonany basy sy noho ny fiantsona hanao fihetsiketsehana. Nitokona tsy nihinan-kanina niaraka tamin’ireo gadra mpanao politika hafa izy roa herinandro lasa izay ary nanaa tampi-bava koa izy ho mariky ny fihetsiketsehana. Noesorina ny tampi-bavany ary nijanona nitokona tsy nisakafo i Al Alawi tamin’ny Zoma lasa teo, araka ny voalazan’ilay pejy Facebook ihany.
Ilay mpikatroka nogadraina, Hilal Al-Alawi
Inona indray ny manaraka?
Iray tamin’ireo pejy Facebook mavitrika manaraka ny vaovao momba ireo voatana nandefa ity sarina mpanao fihetsiketsehana milanja soram-baventy misy soratra hoe: “ Hoentin’ny fanjakana eny amin’ny fitsarana avokoa ve ny tanoran’i Oman?”
Ny fotoana ihany no hamaly ny fanontaniana.